Uchishandisa Wi-Fi munzvimbo ine vanhu vakawanda, kungave kumba kana kuhofisi, kunogona kukonzera kubatana kwako kunonoka-kudzika. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nemunhu wese anoshandisa frequency yakafanana kutaura neiyo router, izvo zvinokonzeresa kuzara.
Iwe unogona zvakare kusangana nenyaya dzinosangana neiyo router kana iwe uri mune imwe kamuri kune iyo router, kunyanya kana iwe uchigara mune hombe imba ine gobvu madziro.
Chimwe chinhu chinogona kupindirana neyako yeWi-Fi kubatana ndiko microwave yako, iyo iwe yaunogona kuwana inokonzeresa kubatana kwako kudonha nguva dzese kwadzinovhurwa.
Muzviitiko izvi kushandisa akasiyana frequency kunogona kukupa iwe yakavimbika kubatana. Mazhinji zvigadzirwa zvemazuva ano zvinopa maviri ma frequency mabhendi: 2.4GHz uye 5GHz. Unogona kuchinja pakati pavo pazvinenge zvichidikanwa.
Muzvokwadi, Mac yako angangotora sarudzo yakanakira otomatiki, asi kana iwe uchida kutora chinongedzo uye nekuchinja yako Mac kuita 5GHz (kana kudzokera ku2.4GHz) saka izvi ndizvo zvauchazofanira kuita.
Ndeupi musiyano uripo pakati pe2.4GHz ne5GHz?
Aya ma frequency anoshanda nenzira yakati siyanei, zvinoreva kuti vanowirirana pavanopihwa pane network. Pane zvikonzero zvehunyanzvi zveizvi, asi isu hatidi kuenda kune izvo nekuda kwechinyorwa chino, iwe unongofanirwa kuziva zvinhu zvitatu:
Iyo 2.4GHz bhendi inononoka zvishoma, asi ine chiratidzo chinogona kufamba zvirinani kuburikidza nemadziro.
5GHz inokurumidza, asi inoshanda zvirinani pamusoro penzvimbo pfupi uye kazhinji mukamuri imwechete.
Zvigadzirwa zvemagetsi nemidziyo yakaita sekusanganisira ma microwave uye maoni evacheche vanoshandisa iyo 2.4 GHz frequency uye vanogona kupindirana nekubatana kwako kana uri kushandisa iyo frequency.
Ndinoziva sei kuti ndiri pa2.4GHz kana 5GHz?
Pane nzira iri nyore yekuona iyo frequency band yawakabatana nayo pane yako Mac.
Batisisa pasi Sarudzo / Alt kiyi uye tinya paWi-Fi icon mune Menyu bar kumusoro kwechiso.
Iyo yekudonhedza-pasi menyu ikozvino inosanganisira yakawanda yakawanda ruzivo iyo iyo inowanzo kuratidza, kusanganisira akasiyana siyana nezve nezve kubatana kwako.
Tarisa pane chikamu chine zita rako reneti kumusoro uye, paunenge uchifamba pasi pasi, unosvika kune rimwe rakanzi Channel.
Kune kurudyi kweizvi iwe uchaona iyo chiteshi nhamba uye (mukati mevabereki) iyo frequency bhendi yekubatana kwako.
Isu zvakare tine chinyorwa ichi chezano pamusoro kutsvaga kana yako Mac Wi-Fi iri 2.4GHz kana 5GHz.
Seta sei 5GHz pane yako router
Usati wachinja Mac yako kuenda ku5GHz unozofanirwa kugadzira iyo 5GHz network. Usati waita izvo ipfungwa yakanaka kutarisa yako router inotsigira vaviri-bhendi kubatana. Vazhinji vanozviita, asi nekukurumidza Google yemuenzaniso ichakubatsira iwe kuona uye pamwe nekuchengetedza awa kana maviri ekugumbuka.
Kana iwe ukaona yako router isingatsigire maviri-bhendi kubatana, saka zvingave zvakakodzera kutora kutarisa kwedu kusarudzwa kwe akanakisa Mac ma routers yemhando yepamusoro.
Kuona kuti Mac yako inokwanisa kubatana ne5GHz chiteshi kwete 2.4GHz iwe unofanirwa kupatsanura mabhendi uye upe rimwe nerimwe zita rakasiyana. Iyo nzira yeiyi inosiyana kubva kune router kuenda kune router, zvinoenderana nekuti mugadziri anovagadza sei.
Semuenzaniso, pane iyo BT Hub (akasiyana mamodheru), iwe unozotanga kuda kuvhura nyowani yebrowser hwindo wobva wonyora 192.168.1.254 mubara rekero kumusoro. Izvi zvinokubatanidza iwe kune Hub Manager. Kuti uchinje chero chinhu, iwe unozoda iyo Admin password, iyo iwe yaunowana pane imwecheteyo kadhi kana chinamirwa kumashure kweiyo router uko network network uye password zvakadhindwa.
Wakashongedzerwa neizvi, unogona kupinda muPamberi nzvimbo yekumisikidza, sarudza Wireless wobva washandura yakasarudzika mabhendi sarudzo kuOn.
Cherekedza pasi iro nyowani network zita uye password izvo zvakagadzirwa uye tinya Save.
Chaizvoizvo, iwe ikozvino washandura yako router kuita maviri akasarudzika manetiweki (2.4GHz uye 5GHz) pane kungori yeimwe vhezheni vhezheni yawaimbova nayo.
Ini ndinogonesa sei 5GHz pane yangu Mac?
Chikamu chekupedzisira chepuzzle ndechekuisa iyo nyowani 5GHz network pamusoro peiyo runyorwa rweiyo yako Mac inosangana otomatiki. Izvi zviri nyore kwazvo kuita:
Vhura Zvirongwa zveSystem uye sarudza iyo Network sarudzo.
Mukona yezasi yekurudyi, iwe uchaona Yepamberi sarudzo. Dzvanya pane izvi.
Iwe uchaunzwa pamwe nerunyorwa rweese akasarudzika maneti ayo Mac yako anotarisa kana uchiedza kubatana neWi-Fi. Idzi dzakatevedzana zvakateedzana, saka iyo iri kumusoro ndiyo yekutanga inotsvaga chishandiso chako.
Kumanikidza Mac yako kunetiweki ye5GHz, ingobaya uye ubatise pazita reneti uye uzvikweze kumusoro kwerondedzero.
Ndinovimba, ikozvino pese paunobatidza Mac yako kana adhi yeWi-Fi inofanirwa kunanga yakananga kuneti ye5GHz.
Kune dzimwe nzira dzekuwana zvakanakisa kubva kune yako Mac's internet adventures, tarisa pa maitiro ekuvandudza Wi-Fi chiratidzo uye sei kugadzirisa Wi-Fi pane Mac.
Yakanakisa mesh Wi-Fi router 2020: Wedzera huwandu uye kumhanya kweiyo yako Wi-Fi
Xiaomi Mi Band 5 Ongororo: Kugadzirisa ese maquirks kubva kuMi Band 4, uyezve mamwe
Yakanakisa isina waya router 2021: Simbisa huwandu uye nekukurumidza kweiyo internet yekubatanidza
Maitiro ekugadzirisa Wi-Fi paMac
Best makarita asingasviki: Ongororo uye kutenga mazano
Kudza Router 3 ongororo: Iyo Wi-Fi 6 router iri smart uye yakashongedzwa
Nyowani Mac Pro 2018 yazvino: Zuva rekuburitsa, mutengo weUK, maitiro & specs
8 Mazano eKuvandudza Yako Wi-Fi Sigino